Niteraka Disadisa Ara-diplaomatika Amin’ny Kazakhstan Ilay Voromaherin’i Emira Qatari Maty · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Oktobra 2016 4:51 GMT
Sary Pixabay . Creative commons.
Ity lahatsoratr'i Aktan Rysaliev manaraka ity dia fiaraha-miasa avy amin'ny EurasiaNet.org ary nahazoana alalana ny famoahana azy eto indray.
Tsy vahiny intsony ao Azia Afovoany, izay toerana malaza manokana ho an'ireo mpakafy fitaizana voromahery, ny fianakavian'ny mpanjaka ao Afovoany Atsinanana.
Tsy dia nisy zavatra tsy nahazatra loatra tamin'ny 28 Septambra, rehefa nitatitra ny Forbes.kz fa nandray fiaramanidina ho any Kazakhstan ny Emira ao Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani, hanao fitsidihana manokana hihazana ho an'ny voromahery malalany .
Mpitsidika tsy tapaka an'i Kazakhstan ny Emira, ary voalaza fa mankafy ny fihazana any amin'ny tany efitra akaikin'ny farihy Balkhash, toerana iray izay fitaizana voromahery. Noheverina haharitra tapa-bolana ny fitsidihana farany nataony saingy nisy zava-nitranga mampalahelo tao amin'ny seranam-piaramanidina Almaty .
Araka ny nambaran'ny mpanao gazety Denis Krivosheev tao amin'ny kaontiny Facebook, maty tao amin'ny toerana fanatobiana entana noho ny “hazavana be loatra” ilay voromahery antsoina hoe Ali tian'ny Emira indrindra. Ny ampitso, maty ihany koa ny voromahery iray hafa.
Nanoratra i Krivosheev fa nentina tany Almaty ny voromahery masina miisa 12 tsy fahita firy ary ho alefa any amin'ny tanàna tatsimon'i Taraz. Nanantitrantitra ireo manam-pahefana ao amin'ny biraon'ny fampanoavana, na izany aza, fa tokony tsy ho alefa ireo vorona ireo raha tsy vita fanaraha-maso satria efa nisy ny tranga nahitana voromahery antitra nalefa tany Kazakhstan, ary nampifamadihana tamin'ny voromahery mbola tanora kokoa izay mety ho naondrana avy eo, ka mety hahatonga ny firenena tsy hanana karazam-borona matanjaka kokoa. Tamin'ny herintaona, natao mangingina ny fanaovana fanaraha-maso mahazatra ary tsy nihoatra ny adiny enina ny faharetany, hoy i Krivosheev nitatitra.
“Tamin'ny alatsinainy [26 Septambra] no nofahanana voalohany izy ireo, saingy efa nanomboka narary ireo vorona,” hoy ny nosoratany. “Tsy nisy antony mazava nitazomana azy ireo kanefa mbola nijanona teo amin'ny toerana nisy azy ihany ireo vorona.”
Mety mitentina 100.000 $ ka hatramin'ny 150.000 $ eo ho eo ny vidin'ny voromahery tsirairay araka ny vinavina, noho izany tsy mahagaga raha mieritreritra ny hanao taratasy fitarainana ôfisialy ny Emira, hoy i Krivosheev, .
Nilaza ny biraon'ny Departemantan'ny Fidiram-bolam-panjakana ao Almaty, araka ny Tengri News, fa notazomina ireo vorona noho ny tsy fanarahana ny fepetra ara-taratasy. Notsinian'ny manampahefanan'ny seranam-piaramanidina ireo tompon'andraikitry ny fadintseranana, mandritra izany fotoana izany, tamin'ny filazana fa nametraka ireo voromahery tao amin'ny faritry ny toerana tsy natao ho an'ny biby velona izy ireo.
Niala tao Kazakhstan ny Emiran'i Qatar tamin'ny 1 Oktobra, ary tsy nisy filazana fa mety mbola hiverina izy – toe-javatra iray mahasadaikatra ho an'ny firenena izay manana tombony amin'ny fizahan-tany avy amin'ny toerana fitaizana voromahery.
Araka ny gazetiboky Forbes , nanolotra fahafahana manokana ho an'ireo liana amin'ny voromahery tamin'ny alalan'ny famelana fihazana malalaka tany anaty ala i Kazakhstan nandritra ny 16 taona. Tamin'ny taona 2000, nanangana lalàna misahana ny fitaizana voromahery mifehy ny raharaha ny governemanta. Manome fahazoan-dalana manokana ho an'ny teratany vahiny izay mampiseho ny fandraisan'izy ireo anjara amin'ny fiarovana sy ny fampitomboana taranaka ny karazam-borona atahorana ho lany tamingana amin'ny alalàn'ilay fialam-boly ny lalàna. Mahazo tombontsoa betsaka avy amin'ny lalàna ireo mpihaza avy any Afovoany Atsinanana, izay efa namatsy vola tamin'ny fikarohana sy ny famelomana indray ireo voromahery misy ao Kazakhstan .
2 andro izayZeorzia